नेता को हो, को होइन : पूर्वसचिव भीम उपाध्याय – AB Sansar
नेता को हो, को होइन : पूर्वसचिव भीम उपाध्याय
September 25, 2020 adminLeaveaComment on नेता को हो, को होइन : पूर्वसचिव भीम उपाध्याय
नेता को हो, को होइन: पूर्वसचिव भीम उपाध्याय
पंचायत र राजतन्त्रमा भन्दा समाज परिवर्तन गर्न लेाकतन्त्रमा धेरै कठिन हुदोरहेछ भन्ने दिब्यज्ञान हाम्रा राजनीतिक विचारक, विश्लेषक, राजनीतिक येाद्धाहरूले आजकल अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । नेपाली समाज वा युवाशक्तिलाई उचाल्नका लागि कुनै यस्तो व्यक्ति पात्र चाहिन्छ जसलाई तारो बनाएर आगो बाल्न सकियोस् । तर लेाकतन्त्रमा त सिस्टमसंग लड्ने हो, व्यक्तिसंग हैन ।
विगतका हाम्रा आन्दोलनहरू सिस्टमको नाममा व्यक्तिविरूद्ध होमिने शिक्षादीक्षा र अन्धभक्त जन्माउने स्कूलिंगमा हुदै आएकोले अहिले ती रणभुल्लमा छन्- को संग कसका विरूद्ध कसरी संघर्ष गर्ने? अमूर्त छ। न समाउने हांगो छ, न टेक्ने भुईं! कुरा बुझे पो- अहिले रूपान्तर गर्नुपर्ने क्षेत्र र विषय डिमासिफिकेशन भैसकेको छ । अब विगतका जस्तो भीड वा हुल र भीडले रूपान्तरण गर्न खोज्नु असफलता अवश्यंभावी र जिवन दिग्दार हुनु हो । मूल मुद्दा: रेाजगारी र आर्थिक समृद्धिले नै निरन्तर उर्जा दिन सक्छ ।
मुलुकको मसिन कर्मचारीतन्त्र हो – तर, कार्यालयका हाकिमहरू मातहत कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको, घूस मागेको, झुलाएको तिर ध्यान दिएको वा हेर्ने गरेका देखिदैनन्। हाकिमहरू अलग्गै कोठाको ढोका लगाएर भित्र ब्यस्तको नेमप्लेट राखेर जनतासंग अलग्गै बस्ने र जनताको पहुँचमा नरहन खोज्ने र यसबाट अनियमिततालाई बढावा दिएको पाईएको छ। तसर्थ, यसका लागि सेवाग्राहीको भीडलाग्ने कार्यालयहरूका हाकिम र कामगर्ने फॉटवाला कर्मचारीहरूको सिट एउटै हलमा राखेर पार्टिशन हटाएर संगसंगै काम गर्नुपर्ने निर्देशन सरकारले दिनुपर्छ। हाकिम सेवाग्राहीको भीडमा आधा समय बिताउनुपर्छ, कागजमा आदेश दिन उभिएरै पनि सकिन्छ।
मातहतका कर्मचारीले बदमासी गरेर पक्राउ परेमा बदमासीसंग सम्बन्धित नभए पनि हाकिम पनि स्वत: २५% सजायको भागिदार हुने कानुन लागू गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा म फस्दिन क्यारे कारिन्दा नै फस्छ पक्राउ परेमा भनेर ढुक्क गैरजिम्मेवार रहने गरेका हाकिमहरू आफू पनि अब फसिएला भन्ने डरले पूरा चनाखो भई काम गर्न थाल्नेछन् र निगरानी बढाउन बाध्य हुने छन्। अहिले त पक्राउ पर्ने फस्ने तर हाकिमलाई केही छुदै नहुने माल मात्र हसुर्न पाउने भएकाले हाकिमलाई सुशासनको मतलबै भएको देखिदैन।
प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसंग हाकिम सम्पर्कमा रहेर के कस्तो छ सेवाग्राहीसंग सोध्दै अनुगमन निरीक्षण गरिरहनुपर्छ ताकि मातहतकाले सताउन नसकोस्। राज्यका सबै अंगलाई सम्हाल्ने क्षमता राजनीतिमा मात्र हुन्छ र हुनुपर्छ। कुशल नेताले राजनीतिक संयन्त्रलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउछ, राज्यका सबै पक्षलाई बिजिनेश दिएर सक्रिय पारिराख्छ। तर नेपालमा आजसम्म मुलुक ठप्प पार्नेहरूलाई नेता मान्नुपर्ने बिडम्बना रहदै आयो। बिरोध र तोडफोड, काटमार गर्ने क्षमतामात्र बिकसित गरिदै गयो।
मुलुकलाई बन्द गर्ने नेता हुन्छ कि मुलुक चलाउन खोल्ने नेता हुन्छ ? सडक अवरोध गर्ने नेता हुन्छ कि सडक सुचारू गर्ने नेता हुन्छ? तोडफोड गर्ने नेता हुन्छ कि सृजना गर्ने नेता हुन्छ? सबैलाई विभाजित गर्ने नेता हुन्छ कि सबैलाई समेटेर हिड्ने नेता हुन्छ? समाज विकास गर्ने नेता हुन्छ कि गफ गर्ने र पद ओगट्ने र देश लुट्ने नेता हुन्छ? सबैलाई सशक्तिकरण गर्ने नेता हुन्छ कि सबैलाई नालायक तुल्याउदै निर्बलीकरण गर्ने नेता हुन्छ? नेता को हुन्छ? नेता हुन उसले माथिका सकारात्मक मापदण्डहरूमा कम्तिमा ८०% अंक ल्याएकै हुनुपर्छ । नत्र उ नेता हैन लुटेरा हुन्छ । हामीले विगत ३ दशकमा नेता पाएको महसुस गरेका छैनौँ।